AC miasa, RC surge absorption circuit design &amp; component selection
Fampandehanana malefaka AC : Eo ambanin'ny volavolan-tsarimihetsika AC na DC, na miaraka amin'ny DC, azonao ampiasaina ny capacitors membrane HVC rehetra. Ny fitsipiky ny fampiharana mahomby dia: 1) Aza mihoatra ny herin'ny dielectric; 2) Mitazona capacitor hihena; 3) Aza mitondra fandidiana corona. Amin'ny maha fampiharana azo ampiharina, dia izao no fomba ampiasanao ireo fitsipika telo ireo.
Ny tampon'ny voltase mamerana dia voltase DC naoty. Fepetra ny vokatra amin'izao fotoana izao amin'ny fanombanana ny habetsaky ny fahafaha-manao sy ny sanda nomena DV / DT. Ho an'ny fampandehanana matetika matetika mba hamerana ny fiparitahan'ny herinaratra, mba tsy hihoatra ny 15 ° C ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny casing ivelany, ary miaraka amin'izay koa, ny mari-pana amin'ny casing ivelany dia tsy ambony noho ny mari-pana ambony indrindra.
Ho an'ny fitsipika 3, mametra ny voltase ivelany amin'ny karazana AC ambony indrindra mba hisorohana ny corona.
Corona dia rafitra insulation ao amin'ny rafitra insulating mahatonga ny ampahany dielectric fahapotehan'ny rivotra pores. Ny fisehoany dia miaraka amin'ny fampiharana ny voltase AC satria ny capacitance mahomby amin'ny pore dia ambany noho ny fitaovana dielectric manodidina. Satria mifandray amin'ny andian-dahatsoratra ny capacitor ambany sanda, ny pore dia tapaka amin'ny gradient malefaka kokoa. Ny Corn Dizzy dia tokony hohalavirina satria ny pitik'afo dia mahatonga ny karbônika dielectric hanova azy ho fitaovana enti-mitondra azy, ary ny travo karbona farany dia fohy.
RC absorption/snubber circuit design
Ny fisondrotry ny fisondrotana dia karazana fizaran-tsarimihetsika tsotra manafoana angovo mba hanafoanana ny spikes malefaka vokatry ny inductance loop ----- Rehefa mihodina ny switch mekanika na semiconductor. Ny tanjon'ny fisondrotry ny fisondrotana dia ny hanesorana ny voltase mandalo sy ny oscillations izay mitranga rehefa mandeha ny switch.
Mitranga ny manome fizaran-tany azo atao rehefa mikoriana ao amin'ny inductor leakage voajanahary rehefa mandeha ny switch. Ny sub-absorption ao amin'ny famatsiana herinaratra maodely switch dia manome iray na maromaro amin'ireto asa telo manan-danja manaraka ireto:
1) Manova ny tsipika mitondra ny transistor fiovam-po bipolar mba hitazonana azy ao amin'ny faritra azo antoka;
2) Esory ny angovo avy amin'ny transistor familiana, mandany angovo ao amin'ny resistor mba hampihenana ny mari-pana miaraka;
3) Ampihena ny oscillation amin'ny transistor switch na diode rectifier mba hamerana ny tampony malefaka, hampihenana ny EMI amin'ny fampihenana ny famoahana sy ny fampihenana ny matetika.
Ny fampandehanan-tsolika fampiasa matetika indrindra dia capacitor sy resistor andiam-pifandraisana amin'ny alàlan'ny fifandraisana switch. Toy izao ny fomba famolavolana damper RC mahazatra:
Safidy singa: Mifidiana resistor tsy inductor. Ny safidy tsara dia ny resistor carbonaceous. Ny fanoherana ny sarimihetsika karbona dia safidy tsara raha tsy esorina izany mba hampihenana ny fanoherana azy amin'ny fikorontanan'ny spiral. Aza manodinkodina satria misy inductance. Fifantenana ny fanoherana avy amin'ny takelaka data mba hanohitra ny avo lenta amin'ny hafanana mitovy amin'ny damper. Ho an'ny capacitance 0.01 μF etsy ambony, ny capacitor mika amin'ny resin'ny epoxy asitrika dia heverina voalohany. Ho an'ny sandan'ny capacitance avo kokoa, ny polypropylene firaka mitsangana, ny kapasitera sarimihetsika foil dia heverina. Ho fanampin'ny inductance avo lenta amin'ny fitaovana axial, ny karazana WPP amin'ny fitarihana axial dia tsara ihany koa. Ny voltase ambony indrindra dia 630 volts DC, ny ambony indrindra dia 1000 volts DC. Ho an'ny malefaka sy ny capacitance avo kokoa, ny polypropylene foil film capacitor no voafantina, anisan'izany ny mitsingevana, metallization sarimihetsika toy ny ankapobeny foil sarimihetsika mba hahazoana habe kely. Ny fampiasana ny sarimihetsika metallization dia mampihena ny tampon'isa amin'izao fotoana izao fahafahana mamorona 1/3 ka hatramin'ny 1/5 ny hafa fanerena tsindry.
Tsotra ny fizotry ny fifantenana ao amin'ny datasheet--peak current ary ny fahafahan'ny RMS amin'izao fotoana izao dia omena miaraka amin'ny tanjaky ny fahefana nomena. Ny capacitance ambony indrindra dia ny vokatry ny DV / DT fahaiza-manao sy ny nominal capacitance. Ny fahaiza-manaon'ny RMS amin'izao fotoana izao dia sanda kely kokoa izay ny kapasitor dia 10 ° C na ny capacitor amin'izao fotoana izao mba hahatongavana amin'ny voltora mifandimby.
Ny latabatra fahaiza-manao DV / DT dia azo ampiasaina hampitahana ny kapasitera fanamoriana CDE sy ny marika hafa. Ho an'ny fidiran'ny mpandidy rehetra, ny sandan'ny DV / DT dia mahatanty ny sanda DV / DT, ary ny karazana HPP dia mahazaka mihoatra ny 2000 V / μs. Ho an'ny fanerena avo lenta, HPFF sy HPPS karazana dia afaka manodina mihoatra ny 3,000 V / μs; HPMF sy HPPM karazana, misintona mihoatra ny 1000 V / μs. Mba hijerena ny tabilao data araka ny halavan'ny trano.
Kapasitera hafa: Ity ny fehezanteny farany amin'ny fifantenana capacitor, hanampy anao hiditra ao amin'ny saha capacitance uniced, izay tsy voafaritra amin'ny fampiasana ny surge absorber, ary tsy amin'ity ampahany ity.
Ilaina ny mahafantatra ny karazana sy ny K avo karazana seramika izay voafetra ny tampon'isan'ny ankehitriny sy mandalo, ary ny baiko dia 50 ka hatramin'ny 200 V / μs. Ny polyester dia manana in-15 ny fatiantoka polypropylène, ary ny polyester dia mety amin'ny RMS ambany amin'izao fotoana izao na tsingerin'ny andraikitra. Mandritra izany fotoana izany, ataovy azo antoka fa heverina ny coefficient voltase sy ny mari-pana. Na dia tsy miankina amin'ny voltora sy ny mari-pana aza ny karazana mika na DPP, ny dielectric seramika avo lenta (toa an'i Y5V) dia mety hamoy ny 1/4 amin'ny fahafahany avy amin'ny mari-pana amin'ny efitrano mankany 50 ° C (122 ° F), manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 50% . Ny fahaiza-manao 1/4 hafa dia mety ho very mandritra ny volavolan-dalàna.
Famolavolana Absorber Fast Board: Rehefa tsy manakiana ny fanjifana herinaratra, dia misy fomba haingana hamolavolana mpitsikilo. Drafitra miaraka amin'ny fanoherana karbona 2 watts. Safidio ny sandan'ny fanoherana mba hahafahan'ilay cours mitovy hikoriana tsy misy enta-mavesatra be loatra, ary mitodika any amin'ny absorber ny courant rehefa mandeha ny switch. Ny fotoana mikoriana amin'ny alalan'ny switch alohan'ny fandrefesana na ny kajy ny switch, ary ny fotoana mikoriana alohan'ny hivezivezena ny switch.